कर्णालीले नचिनेको अन्तर्राष्ट्रिय अल्ट्रा धाविका सुनमाया बुढा – Dullu Khabar
कर्णालीले नचिनेको अन्तर्राष्ट्रिय अल्ट्रा धाविका सुनमाया बुढा
१६ कार्तिक २०७६, शनिबार १३:३०
सुर्खेत । जसरी जमैकाका उसेन वोल्टले छोटो दुरीको दौडमा विज्ञानलाई चुनौती दिए । हिमचितुवा हरि रोकायाले अल्ट्रा दौडमा विश्व रेकर्ड राखे । मिरा राईले अल्ट्रामा विश्वभरि आफ्नो कीर्तिमानी परिचय बनाइन्, ठीक त्यसरी नै दौडमा केही नयाँ कीर्तिमान राख्ने चाहनाले हरेक दिन सताउँछ अल्ट्रा धाविका सुनमाया बुढा(२१)लाई ।
खस सभ्यताको ओरिजिन बोकेको चौधविसको पातारासी गाउँपालिका पेरे गाउँमा जन्मिएकी सुनमायाको दौडमा एक नयाँ उत्कन्ठा छ । देशको नाउँ उँचो पारुँ । जुम्लाको नाउँ विश्वमा फैलाऊ र चौधविसको नयाँ परिचय बनाऊँ ।
२०६८ देखि दौडिएकी सुनमायालाई असम्भव केही छैन भन्ने कुराको दर्शन दौडले नै दियो । विद्यालयस्तरीय जिल्ला, क्षेत्रीय हुँदै राष्ट्रिय प्रतिस्पर्धामा ५०० मि. र १५०० मि. दौडमा २०६९ मा सवै तहमा प्रथम भएपछि एउटा नयाँ जाँगर पैदा भयो ।
विद्यालयमा रहरले दौडिएकी सुनमायाले दौडमा नयाँ सपना बुन्न थालिन् र २०७२ को एसएलसीपछि सुनमायाको जीवनमा दौड, दौड र फेरि पनि दौडको सूत्र अहोरात्र लागू भएको छ । उनले कर्णाली स्पोर्टस् क्लव जुम्लामा आवद्ध भएर विश्व चर्चित हरि रोकायासँग प्रशिक्षण लिइरहेकी छिन् । हरि रोकायाको सानिन्ध्यता, मिरा राईसँगको मित्रता, धुव्रविक्रम मल्लको प्रेरणा तथा कर्णाली स्पोर्टस क्लवको छहारी सुनमायाले दौडमै पाएका जीवनका सुन्दर उपहारहरु हुन् ।
सुनमायाले विद्यालयस्तरीयदेखि अन्तर्राष्ट्रिय पुरस्कारहरु जितेकी छिन् । चार बर्षदखि विश्वभरिका विभिन्न दौडमा सहभागी भएकी सुनमायाले धरान म्याराथन, जुम्ला म्याराथन, व्रेथलेस रनिङ, एमएसआइजी, तेन्जिङ हिलारी, जुम्ला रारा अल्ट्रा, गोल्डेन वल्र्ड ट्रेल सिरिजमा सहभागी तथा पदक जितेकी छिन् ।
सुनमायालाई पदक जित्नु एक लत बनेको छ । दौडमा नै करियर बनाएर नयाँ कीर्तिमानको सपनाले सुनमायालाई दौडिन जाँगर चलिरहेको छ । स्वास्थ्यले साथ दिएमा दौडेरै करियर बनाउन सकिने आत्मविश्वास जागृत भएको छ ।
सुरु सुरुमा दौडिदा दौडसम्बन्धी कुनै ज्ञान थिएन सुनमायासँग । एउटा रहरले दौडिएकी सुनमायालाई दौडको ज्ञान हरि रोकायाले दिए । पहिलो पटक काठमाडौँमा राष्ट्रिय प्रतियोगितामा गाडीमा आउँदा वान्ता भएकोले निकै गाह्रो भएको अनुभूति छ सुनमायासँग ।
नौ कक्षामा दुई महिना ट्रेनिङ लिएर केही समय हराइन् पनि सुनमाया । जव समाचारहरुमा विश्वरुपा बुढा, मिरा राईहरु आउन थाले । सामान्य ज्ञानमा पढ्नु पर्ने भयो, तव सुनमायालाई फेरि दौडको सपना जागृत भयो । नाम र परिचयको भोक जागृत भयो । हरि रोकायाको प्रशिक्षणलाई थेग्न नसकी घर फर्केकी सुनमाया पुनः प्रशिक्षणमा फर्किन् र विगत चार बर्षदेखि निरन्तर दौडिरहेकी छिन् ।
निराशालाई, कठिन परिस्थितिलाई झेल्दै एउटा नयाँ आशाको दियो बनेकी छिन् । विश्वस्तरीय प्रतिस्पर्धामा सहभागी भएपछि नेपालको ट्रेनिङ, डाइट, व्यवस्थापन निकै कमजोर भएको पत्तो पाइन सुनमायाले । राज्यको कमजोर व्यवस्थापनले खेलाडीहरु आशावादी होइन निराश हुने र राम्रा प्रतिभाहरु वाहिरिने संकटलाई अनुभूति गरिन् उनले ।
यार्सान्यूजसँग सुनमायाले राज्यको कमजोर व्यवस्थापनलाई पनि सकरात्मक उर्जामा फेर्दै दौडमा निरन्तर रहने बताइन् । उनले खेलकै दौरान स्वीजरल्याण्ड, हङकङ, चिन, फ्रान्स, इटली, मलेसिया र अष्ट्रिया भ्रमण गरेकी छिन् । स्वीजरल्याण्डबाट नेपाल फर्किने क्रममा वासिङ मेसिनमा भिजेको पासपोर्टमा फोटो नचिनिने र अक्षर मात्र बुझिने खालको थियो । अंग्रेजी भाषा नजानेकै हुनाले ट्रान्जिटमा भोगेको चुनौतीले सुनमायालाई अंगे्रजी जान्नै पर्ने चुनौती थपियो र सिकिन् पनि ।
सुनमाया अल्ट्राको विश्वस्तरीय प्रतियोगिता गोल्डेन वल्र्ड ट्रेल सिरिजमा विश्वव्यापी चौथो भइन् भने नेपालबाट प्रथम । कर्णाली स्पोर्टस् क्लवका अध्यक्ष सरोज शाहीको विश्लेषणमा ‘सुनमायाको उपलब्धीलाई राज्यले गौरव गर्न नै सकेको छैन । सुनमाया जुम्लाले उत्पादन गरेको विश्वस्तरीय अल्ट्रा धावक हुन् ।’
सुनमायाको पाइला पछ्याउँदै उनकी वहिनी राममाया पनि दौडिरहेकी छिन् । प्रथम जुम्ला रारा अल्ट्रा म्याराथनमा सुनमाया बुढा प्रथम भएकी थिइन् भने दोस्रो रारा अल्ट्रा म्याराथनमा सुनमायाकी वहिनी राममाया बुढा प्रथम भइन् । ४९ किलोमिटरको एउटै प्रतियोगितामा दिदीवहिनीले जितेको सायद यो वल्र्ड रेकर्ड नै होला ।
सुनमायाले दौडेर जितेका उपलब्धीहरु नेपालले सम्झिनलायक छन् । नेपालमा राज्यले लगानी गरेका क्षेत्रभन्दा बाहिरबाट अन्तर्रा्ष्ट्रिय उपलब्धीहरु हासिल हुनु राज्यकै लागि चुनौती हो ।
कर्णाली प्रदेशले पर्यटन प्रवद्र्धन गर्नका लागि सुनमाया बुढाजस्ता अन्तर्राष्ट्रिय धाविकाहरुलाई आफ्नो व्रान्ड एम्वेसडर बनाउँदा फाइदा हुने लेखक रामसिंह रावलको तर्क छ ।
नजिकको तीर्थ हेलाको उखान सुनमायाको हकमा पनि लागू हुन्छ । पर्यटन, खेल प्रवद्र्धनका नाममा अनावश्यक खर्च गरिरहेका गाउँपालिका, नगरपालिका र प्रदेश सरकारका लागि सुनमायाहरु एउटा फरक उदाहरण हुन् । कर्णाली स्पोर्टस क्लवको छहारी, हरि रोकायाको प्रशिक्षण र विभिन्न क्षेत्रको स्पोन्सरमा संसारभरि दौडेर जितिरहेका छोरीहरुका लागि स्थानीय सरकारले स्पोन्सर नै गर्दैन । पातारासी गाउँपालिकाका लागि सुनमाया एक दुर्लभ हिरा हुन् । गाउँपालिका, प्रदेश र नेपाल सरकारले नचिने पनि विश्वले अल्ट्रा धावनमा सुनमायालाई चिनेकोमा खुशी प्रकट गर्नुहुन्छ प्रशिक्षक हरि रोकाया ।
सुनमायालाई ग्लोवल स्पोर्टस फाउन्डेशनले विश्वव्यापी रुपमा स्पोर्टस र सामाजिक कार्यमा सहभागिताका आधारमा १०१८ मा १० हजार डलरको पुरस्कार दिएको छ ।
सुनमाया राष्ट्रिय स्तरको प्रतियोगिताका लागि पनि निकै उत्सुक छिन् तर एउटा राष्ट्रिय प्रतियोगिताका लागि पाँच बर्ष कुर्नुपर्ने स्थिति छ । बर्षौसम्म राष्ट्रिय प्रतियोगिता कुरेर वस्न नसकिने हुनाले अल्ट्रामा ध्यान दिनुपरेको सुनमायाको जिकिर छ ।